China Machine Foam Machine China Manufacturers & Suppliers & Factory
Machine Foam Machine - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Machine Foam Machine)
Ikhwalithi yephrinti ye-Sandal Eva Foam
Iphrinta lethu le- EVA Foam lidayisa kahle futhi lingasebenzisa i- A3 UV Printer ebhizinisini lakho futhi lingakwazi ukuqala ibhizinisi lakho ngokuthengisa kabusha iphrinta yethu ye- UV emakethe yakho yangakini. Umshini wephrinta ye-UV Inkjet ungaphrinta ukuphakama kwe-20cm nobubanzi buka-60cm ngoba ungalawula amanye...
izicathulo ziphuma nge-foam printer intengo
I-Shezhen RFC ithuthukise iphrinta ye- Direct Ink to UV Inkjet kusukela ngonyaka ka-2009, futhi iqale umkhiqizo omkhulu ngonyaka ka-2010. Singumkhiqizi wezwe wokuqala we- Ink Inkjet Printer . Iphrinta ye-UV ingaphrinta noma yiliphi amagama nesithombe ku-eva foam, ingubo, iphepha, ingilazi, i-tile njll ngqo,...
Iphrinta ye-Sandal Eva Foam ethengiswayo
Ngokuvamile i- EVA Foam Printer ingaphrinta noma yisiphi isithombe namazwi ku-eva foam, itileyili ye-ceramic, ingilazi, iphepha, ingxobo njll yokuhlobisa nokukhangisa. Iphrinta ye-UV Inkjet Eqondile , okuhle ukukhetha ukwakha ibhizinisi elisha. I-Sandals Eva Foam Printer edayiswa uhlobo oluthile lwezinto zokusebenzisa...
Iphrinta yethu ye- Foam Foam iyamukela uhlelo lokulawula ikhomputha ye-axis. I-A3 UV Printer ixhunywe kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Iphrinta ye-UV ephathekayo ingasetshenziswa e-Hotel, House, School, enkulisa, eSontweni, ePaki, emgwaqweni, ehholo lokubonisa, ezitolo zokuthenga, ezitolo zokudlela, eTheatre,...
Izindawo ze-Sandals Eva Foam zeprinta
Iphrinta ye-Foam ye- RFC EVA ihlomiswe nge-ink eliphezulu eliphezulu. Izinhlamvu zeyinki zifana nopende lwe-latex olusekelwe emanzini, olusondelene nemvelo, lungamelana namanzi ngemva kokumiswa, futhi lukwazi ukuhlanganiswa ngokugcwele nomkhiqizo, alukwazi ukukhokhela isikhumba, ungapheli, kulula ukuzinakekelwa....
I-eva ye-foam decals, ucabanga nje ngephepha le-fo foam, bese uphuma.Lezi Zinqunto Eziphezulu Zasekhaya Ezokuziqhenya I- Eva Foam I-Printer izokunika ulwazi oluhle, isithombe esicacile nesithombe se-3D sivela odongeni, yenza izinqumo zakho zasendlini ngomusha isitayela semfashini. I-Sandals Eva Foam Printer Kit...
I-Sandals Eva Foam Printer
Imishini yokunyathelisa e- RFC ehlukahlukene eyenziwe nge- A3 eye yamukelwa ubuchwepheshe obuhlakaniphile nobuchwep ukudweba phezu kwayo yonke indawo ephepheni ngaphandle kwesandla. I-RFC iba ngowokuqala ukusebenzisa lolu buchwepheshe, futhi inezinombolo zamalungelo obunikazi bomthetho kazwelonke. I-RFC imakethe...
I-Eva Foam Printer Instructions
I-RF-A3UV A3 UV iphrinta isebenzisa umbala oyisisekelo "CMYK" ukuphrinta izithombe ngokuqondile kunoma iyiphi i-materail .Ungaphrinta zonke izithombe ofuna ukuziphrinta entweni ngaphakathi kwendawo yokunyathelisa .Kukhona ngisho nokuhleleka komklamo oyingqayizivele, konke ofuna ukukwenza ngabaqambi bakho....
I-UV Digital Printer i-Eva Foam iphrinta
Ufuna umshini ophezulu wokunyathelisa ku-eva foam? I-RFC A3 UV Printer Machine isisindo sakho esihle kakhulu. Njengoba sekuhlangenwe nakho kweminyaka engu-10 ensimini ye-UV Printer kanye namaqembu amakhulu amakhono azinikele ekuthuthukiseni nasekuthuthukisweni, i-RFC UV Printer inqwaba ngaphezu kwamanye amaprinta....
I-DX5 ikhanda umshini wokunyathelisa we-Eva Foam
I-New Technology Ubuchwepheshe be- A3 UV bungaphrinta noma yisiphi isithombe namazwi kunoma yiluphi ulwazi, iphepha, isithombe sezithombe, ingilazi, i-tile, i-plaster njll yokuhlobisa ngesinqumo esiphezulu esingu-1440dpi. I-DX5 Inhloko Yokushicilela Umshini we- Eva Foam uhlobo lwemishini ye-"non-contact"...
Izibuyekezo ze-Eva Foam Printer
I-RFC RF-A3UV yikhiqiza yokuqala ye- A3 UV emhlabeni ekuqaleni, inkampani ye-Refinecolor inamakhasimende amaningi kuwo wonke umhlaba, kufaka phakathi inkampani edume kakhulu ye- UV Printer . I-Eva Foam Printer ibukeze uhlobo lokungena okungathintana nohlobo lwe-jet uhlobo lwe-digital, ukubuyekezwa kwe-Eva Foam...
I-Eva Foam Printer Price
I-RF-A3UV Inkjet Printer Ngokuqondile ku-Eva Foam ingaphrinta ngekhwalithi ephezulu ye-vap foam ngobukhulu obukhulu obukhulu ezindaweni ezihlukahlukene. Umshini wokunyathelisa we-A3 we-UV Ngokuqondile kwento ethile, akugcini nje ukukhombisa ukugqama kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi, kodwa futhi...
Machine Foam Machine Machine Printer Machine Coffee Machine Machine Machine Cup Printer Machine Best Machine Printing Machine Machine Printer Machine Thenga I-Macaron Printer Machine Foam Coffee Machine